Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Tranga COVID-19 voalohany notaterina tao amin'ny Village Olympika Tokyo
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Japon • fivoriana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny lalao, nofoanana tamin'ny taon-dasa noho ny valanaretina COVID-19 manerantany, nokasaina hotanterahina tsy misy mpijery sy ambany fifehezana ara-pahasalamana henjana eo anelanelan'ny 23 Jolay sy 8 Aogositra.
Ny tranga voalohany voan'ny virus coronavirus tao amin'ny Village Olympika dia nitatitra nandritra ny fizahana natao.
Talohan'izay dia solontena nizeriana iray manodidina ny 60 taona no lasa mpitsidika voalohany ny lalao nampidirina hopitaly niaraka tamin'ny COVID-19.
Miezaka ihany koa ny manam-pahefana hitady mpampita lanjan'ny Ogandey, izay tsy nalaza ho an'ny fizahana COVID-19 ary tsy hita tao amin'ny efitranon'ny hoteliny.
The Lalao Olaimpika Tokyo 2020 Nanambara ny tompon'andraikitra fa ny tranga COVID-19 voalohany dia notaterina tao amin'ny Village Olimpika any Tokyo, Japon, fito andro monja talohan'ny daty hanokafana ny lalao. Ny hetsika dia kasaina hanomboka amin'ny 23 Jolay ary kasaina hotanterahina tsy misy mpijery na eo ambany fifehezana ara-pahasalamana henjana.
"Izany no tranga voalohany tao amin'ny Village izay notaterina nandritra ny fitsapana ny fizahana," hoy i Masa Takaya, mpitondra tenin'ny komity mpikarakara, androany.
Tokyo 2020 Nanamafy ny Tale jeneraly Toshiro Muto fa teratany vahiny mandray anjara amin'ny fikarakarana ny lalao ilay olona voa. Tsy naseho ny zom-pirenenan'ilay olona, ​​noho ny olana manokana momba ny fiainana manokana.
Ny fampahalalam-baovao Japoney koa dia nitatitra fa solontena nizeriana iray manodidina ny 60 taona no lasa mpitsidika voalohany ny lalao nampidirina hopitaly niaraka tamin'ny COVID-19. Voamarina fa voan'io aretina io ilay olona teny amin'ny seranam-piaramanidina ny alakamisy ary nampidirina hopitaly.
Ny manampahefana Japoney koa dia manandrana mitady mpampita lanjan'ny Ogandey 20 taona, Julius Ssekitoleko, izay tsy nalaza ho an'ny fizahana COVID-19 ary nanjavona tao amin'ny trano fandraisam-bahininy tao Izumisano, prefektioran'i Osaka, omaly. Voalaza fa namela taratasy kely izy nilaza fa tsy te hiverina any Oganda izy.
Tokyo dia kasaina hijanona ao anatin'ny toe-javatra maika noho ny faharetan'ny fifaninanana noho ny fiakaran'ny aretina. Ny renivohitra Japoney dia nitatitra tranga vaovao 1,271 1,000, omaly, izay andro fahatelo mahitsy izay nitombo XNUMX XNUMX ny fiakarana isan'andro.
Vondronà mpanao fihetsiketsehana no nidina an-tsehatra nandalo ny toerana Olaimpika iray tany Tokyo tamin'ny zoma, nitaky ny hanafoanana ny Lalao.
Ny valim-pifidianana nasionaly farany teo dia nampiseho fa ny ankamaroan'ny Japoney dia naniry ny hanafoanana na hampihemotra ny Lalao, miaraka amin'ny 78% amin'ireo namaly fa nilaza fa nanohitra ny Lalao natao izy ireo na dia mbola tsy tapitra aza ny valanaretina COVID-19.